अण्डकोष क्यान्सर हुने आठ लक्षण - Jhapa Today
अण्डकोष क्यान्सर हुने आठ लक्षण
Posted by: Jhapa Today on September 11th, 2020 ·
क्यान्सर शरीरका विभिन्न अंगहरुमा हुन सक्छ । त्यसमध्ये अण्डकोषको क्यान्सरका बारेमा कमै सुनिन्छ ।
अण्डकोषको क्यान्सर पुरुषमा हुने एक प्राणघातक रोग हो । त्यसैले हरेक पुरुषले यस रोगको विषयमा राम्रो जानकारी राख्नुपर्छ । पुरुषमा हुने सबै प्रकारका क्यान्सरमध्ये १ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै अण्डकोषको क्यान्सर हुन्छ ।
अलिकति ध्यान दिने हो भने सहजै यो रोगको निदान गर्न सकिन्छ र सुरुवाती अवस्थामा उपचार गरे बिसेक हुन सक्छ । अण्डकोषमा गाँठो हुनु वा अण्डकोष ठूलो हुनु यसको प्रारम्भिक लक्षण हो । यस्तो अवस्थामा तुरुन्तै डाक्टरलाई भेट्नुपर्छ ।
१. पिठ्यु र पेटको दुखाई
पिठ्यु र पेटको दुखाई अण्डकोषको क्यान्सरको पहिलो लक्षण हो । अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ कि ‘लिम्प नोड’ बढ्नाले कलेजोसम्म क्यान्सर पुग्छ र कलजोमा दुखाई हुन थाल्छ ।
२. अण्डकोषमा नदुख्ने गाँठो
अण्डकोषमा नदुख्ने गाँठो पैदा हुनु पनि क्यान्सरको सुरुवाती लक्षण हो । सुरुमा यो गाँठो एउटा मटरको दाना बराबर हुन्छ । तर, बिस्तारै ठूलो हुँदै जान्छ ।
३. अण्डकोषको थैली ठूलो हुनु
अण्डकोषको थैलीमा भारीपन महसुस हुनु पनि क्यान्सरको प्रारम्भिक लक्षण मानिन्छ । त्यसैले थैली बढ्दा वा यसमा दुखाई हुँदा बेवास्ता नगरिकन तुरुन्त डाक्टरकहाँ जानुपर्छ ।
४. अण्डकोषको थैलीमा तरल पदार्थ जम्नु
अण्डकोषको थैलीमा तरल पदार्थ हुनु सामान्य कुरा हो । तर, यो यदि एक हप्ताभन्दा बढी समयसम्म रह्यो भने सावधान हुनुपर्छ । अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ कि यस्तो अवस्थामा क्यान्सर भएको हुन सक्छ ।
५. निप्पल नरम हुनु
पुरुषको निप्पल अचानक नरम र मुलायम भयो भने अण्डकोषको क्यान्सरको प्रारम्भिक लक्षण हुन सक्छ । अण्डकोषमा ट्युमर हुँदा एक प्रोटिन उत्पन्न हुन्छ जसले पुरुषको निप्पललाई प्रभावित गर्छ । यस्तो अवस्थामा सावधान हुनुपर्छ ।
६. अण्डकोषको आकारमा परिवर्तन
अण्डकोषको आकारमा परिवर्तन आउनु पनि क्यान्सरको प्रारम्भिक लक्षण हो । यसका अलावा अण्डकोष सुन्निएको अवस्थामा पनि तुरुन्तै डाक्टरलाई देखाउनुपर्छ ।
७. रगतको ढिक्का जम्नु
रगतको ढिक्का नशामा जम्दा सास लिन कठिनाई उत्पन्न हुनुका साथै खुट्टा सुन्निन थाल्छ । यो अण्डकोषको क्यान्सरको प्रारम्भिक लक्षण हो । नशामा रगत जम्नुलाई डिबिटी वा डिप भेनर थ्रोम्बोसिस भनिन्छ ।
अण्डकोषमा हुने इन्फेक्सनलाई ओर्चिटिस भनिन्छ । अण्डकोषमा इन्फेक्सन हुनासाथ तुरुन्त जँचाउनुपर्छ । यो क्यान्सरको सुरुवाती लक्षण पनि हुन सक्छ । अनलाइनखबरबाट साभार